भारतीय प्रोफेसर स्वैन भन्छन्- ‘नेपाल कश्मिर होइन, नेपालकाे नयाँ नक्साकाे वि’रोध गर्नुकाे अर्थ छैन’ -
भारतीय प्रोफेसर स्वैन भन्छन्- ‘नेपाल कश्मिर होइन, नेपालकाे नयाँ नक्साकाे वि’रोध गर्नुकाे अर्थ छैन’
काठमाडौं । स्विडेनमा कार्यरत भारतीय नागरिक अशोक स्वैनले नेपालले जा’री गरेको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सालाई भारतले वि’रोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताएका छन् । स्विडेनको उप्साला विश्व विद्यालयमा शान्ति र द्व’न्द्व अनुसन्धान विषयका प्राध्यापकको रुपमा कार्यरत अशोकले सामाजिक सञ्जाल ट्वी’टर मार्फत एकाउन्टबाट ट्वीट गर्दै नेपालकाे नयाँ नक्साकाे भारतले वि’राेध गर्नुकाे अर्थ नरहेकाे बताएका हुन् ।
उनले भारत र नेपाल बीच ‘नक्सा यु’द्ध’ भएका पनि बताएका छन् । ‘भारतले नेपालको नयाँ नक्सा अ’स्विकार गर्यो । भारतले यसलाई स्विकार गर्छ भन्ने कसैलाई लागेको पनि थिएन । यद्यपि, यो ‘नक्सा यु’द्ध’ कसले सुरु गरेको हो ? किन भारतले नोभेम्बर २०१९ मा एकतर्फि रुपमा नयाँ राजनीतिक नक्सा ल्याउनु परेको थियो ?
यो शक्तिले उन्माद मोदीद्वारा कश्मिरको नक्सा पुनः तयार गर्नका लागि थियो । तर, नेपाल कश्मिर होइन,’ उनले लेखेका छन् । नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय मिडियाहरू आ’क्रोशित हुँदै नेपालविरूद्ध प्रचारबाजी गरिरहेका छन् ।